Ejypta: Mpikatroka Sy Bilaogera Voasambotra Ary Navotsotra Tany Amin’ny Tany Foana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2017 19:15 GMT
Mandehandeha Eny Amin'ny Tany Foana ireo Bilaogera
Bilaogera sady mpanao gazety Hossam El Hamalawy, izay nanaraka akaiky ny fivoaran-draharaha, nanoratra hoe:
Navotsotry ny polisy androany atoandro ireo mpikatroka Kefaya sisa tavela nogadraina, rehefa tao an-tany efitra Qattamiya nandritra ny alina tontolo, nogadraina tao anaty kamiao-fonja roa.
Anankiroa ireo kamiao fonja; ny iray nanagadràna olona valo: Ahmad Droubi, Adham el-Safti, Omar Mustafa, Ahmad Samir, Khaled Mustafa, Sherif Ragab, Mohamed Abdel Qader, Kareem el-Sha’er.
Ny kamiao iray kosa nanagadràna mpikatroka roa ihany: Mohamed Gamal sy Omar el-Hadi.
Tsy navela niala tao anatin'ny kamiao ireo gadra, araka ny resaka an-tariby niarahana tamin'i Droubi, ary nomena sakafo tamin'ny 4 ora maraina ihany. Tsy maintsy ao anatin'ny kamiao ihany koa izy ireo no mivalan-drano ao anaty boaty sy tavoahangy Koshari foana, avy amin'ny polisin'i Mubarak.
Nanomboka nandeha indray ireo kamiao fonja ny atoandro ary nandraraka tsirairay an'ireo gadra tamin'ny toerana samihafa ao amin'ny tany efitra, nanomboka tamin'ny 2:40 hariva izany araka ny filazan'ilay mpisolo vava Rajia Omran.
Natao nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ny mpanohitra ny fisamborana, anisan'izany mpanohitra izany ny Mpirahalahy Miozolomana sy ny Kefaya, manohitra ny fanitsiana ny lalàmpanorenana. Notontosaina androany koa ny fitsapan-kevibahoaka momba ny fanitsiana izay manampy ny Antokon'ny Fitondrana (NDP) ary manilika ireo Islamista mpanohitra amin'ny rafi-politika. Vitsy ireo mpifidy tamin'ny fitsapan-kevibahoaka, izay niavaka tamin'ny fitroarana sivily sy fifandonana tamin'ny polisy araka ny hita ao amin'ny sary etsy ambany, noho ny antson'ny mpanohitra mba tsy handray anjara amin'izany fitsapan-kevibahoaka izany no anton'ny taha-pahavitrihana vitsy.
Araka ny filazan'ilay bilaogera Alaa Abdelfattah, ny fanitsiana – dia “miantoka ny fitohizan'ny fitondrana didy jadona ao amin'ny firenena, ny fandovàna ny fandimbiasam-pahefana ary ny fanafoanana ny fitsarana manara-maso ny fifidianana.”
Fa inona no nitranga tamin'ireo mpikatroka niafara tany am-ponja tao Ejypta?
Ny rohy manaraka dia mampiseho ny fiainana ao am-ponja. Misy koa ireo sary sy rohin-dahatsary mampiseho ny fepetra fadiranovana iaretan'ny gadra rehefa tratra amin'ny fihetsiketsehana.
Nanamarika ity manaraka ity mikasika ny ao amin'ny efitry ny fonja sy ny fikarakarana ny gadra aho:
Voalohany: Tery loatra ny efitry ny fonja; 3 * 4 metatra ny iray amin'ireo efitry ny fonja ary hametrahana gadra 11; ny hafa kosa 6 * 3 metatra ary hametrahana gadra eo amin'ny 14; Nahavita naka ny sarin'izy ireo i Ikhwanweb tamin'ny alalan'ny kamera amin'ny finday izay nafeniny tao amin'ny akanjony rehefa nosamborin'ny polisy izy.
Faharoa: Tsy sahaza ho an'ny olombelona ny toeram-pivoahana.
Fahatelo: Ratsy karakara ireo gadra: voaràra ny fitsidihana, tsy mahazo mitsidika azy ireo ny mpisolovava raha tsy hoe milaza fa hitokona tsy hisakafo ny gadra, mamela ny mpisolovava hiditra ao amin'ny efitry ny fonja ny polisy mba hiezaka handresy lahatra ny gadra mba hanatsahatra ny fitokonana tsy hisakafo .
Faha-efatra: Didy mampiadihevitra avy amin'ny manampahefan'ny Fiarovam-panjakana.
Fahadimy: Tsy misy fahasamihafana eo amin'ny Mpirahalahy Miozolomana sy ny gadra Kifay; mitovy ny fandraisana azy ireo, famoretana sy fanenjehana, mitovy ny politika ampiasainy ho an'ny mpanohitra, izay voalaza ao anatin'ny fanitsiana ny lalàmpanorenana.
Fahaenina: Niharan'izany famoretana izany ny MB, mpikambana ao amin'ny Kifaya; mitovy ny rafitra eo amin'izy ireo.
Ny Sivana ve no Vahaolana?
Ao Ejypta, maro ireo mpikatroka no sady bilaogera, mba ahafahan'izy ireo maneho ny fitarainan'izy ireo momba ny manampahefana sy ny rafitra. Mba hampihenàna ny fitomboan'ny mpanohitra, manantena ilay mpitsara Abdel Fattah Mourad fa hanakana bilaogy sy tranonkala 21 izay voalaza fa manohintohina ny fiarovam-pirenena ao Ejypta, manala-baraka ny endrik'i Ejypta any ivelany, ary manevateva ny Filoha Hosni Mubarak.
“Hijery ny fitoriana napetrak'ilay mpitsara Abdel Fattah Mourad tamin'ny Talata, tamin'ny 9 ora maraina mba hanakatona bilaogy sy tranonkala 21 ny Fitsarana Ara-panjakana,…MISEHOA AZAFADY! MILA NY FIRAISANKINANAREO SY NY FANOHANANAREO NY TONTOLON'NY BILAOGY EJYPTIANA,” hoy i El Hamalawy.
Sary: Amr Abdallah